Using Plain English ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအင်္ဂလိပ်စာအရေးအသား - Myanmar Network
Using Plain English ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအင်္ဂလိပ်စာအရေးအသား
Posted by zar ni (My Way!) on September 4, 2013 at 17:30 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ရုံးစာရေးသားတော့မည်ဆိုလျှင် လူအများစုသည် စကားလုံးခန့်ခန့်ညားညား၊ ၀ါကျတည်ဆောက်ပုံ ခန့်ခန့်ထည်ထည် စသည်တို့နှင့်သာရေးသားလာခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ရေးသားရန်လည်း သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခံခဲ့ရသည်။ သို့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းတို့အား သာမာန်လူတို့နားလည်ဖို့ခက်လာတော့သည်။ ဗြိတိန်တွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ 8.4 သန်းခန့်သည် စာရွက်စာတမ်းများဖြည့်ရန်၊ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်ညှိနိုင်းရန်၊ သို့မဟုတ် ဟင်းချက်နည်း လမ်းညွှန်ဖတ်ရန် တို့တွင်ပင် အခက်အခဲရှိနေသည်ဟုဆိုသည်။
အရေးကြီးသည့်အချက်က လူနားမလည်သည့်အရေးအသားသည် ဒီမိုကရက်စံနှုန်းများကို ချိုးဖောက်နေသည်ဟုလူအများက ခံစားနေရသည်။ ဥပမာ Plain English Campaign အရာရှိများသို့ ပါရဂူဘွဲ့နှစ်ဘွဲ့ရအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ စာရေးကာရင်ဖွင့်သည်။ သူမအနေဖြင့် အဆိုပါအရေးအသားများအား နည်းနည်းမှနားမလည်ပါဟု ဆိုသည်။
ခေတ်သစ်စာတတ်မြောက်မှုဆိုသည်မှာ စာရေးစာဖတ်တတ်ရုံသက်သက်ဖြင့် သတ်မှတ်မရနိုင်တော့ပါ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ပုံနှိပ်စာလုံးများအား ဖတ်၍နားလည်ခြင်း၊ အိမ်၊ ရုံး၊ ရပ်ကွက်ထဲ နေ့စဉ်ဘ၀တွင် ယင်းနားလည်မှုအားပြန်လည်အသုံးချခြင်းပြုလုပ်နိုင်ဖို့လိုသည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ၄၀% ခန့်သည် low literacy စာရေးစာဖတ်တတ်ရုံ သူများသာဖြစ်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ဤကား အင်္ဂလိပ်စာကို မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်သုံးသူများအတွက်ဖြစ်ဆိုလျှင် အင်္ဂလိပ်စာကို နိုင်ငံခြားဘာသာအဖြစ်အသုံးပြုသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည့် စာပေရေးသား မည်ဆိုလျှင် plain English သည်စဉ်းစားရွေးချယ်သင့်သည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
PLAIN, the Plain Language Association International ဆိုသည့်အဖွဲ့အစည်းက စာဖတ်သူနှင့်စားသုံးသူတို့ဖက်မှရပ်တည်ကာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအင်္ဂလိပ်အရေးအသား စံနှုန်းများ၊ အလေ့အထများ ပွားများလာစေရန်နှိုးဆော်လျက်ရှိသည်။ plain English ဖြင့်ရေးသားသော အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်းများသည် ၄င်းတို့နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရသည့် စားသုံးသူ၊ ဖောက်သည် များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးရရှိလာကြသည်ဟုဆိုသည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအင်္ဂလိပ်စာအရေးအသား လှုံ့ဆော်ရေးလှုပ်ရှားမှုများက အောက်ပါကဲ့သို့သတ်မှတ်သည်။
‘Writing that the intended audience can understand and act on the first time they read it.’ စာဖတ်ပရိတ်သတ် ပထမဦးဆုံးဖတ်စဉ်မှာပင် နားလည်နိုင်ရန်နှင့် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အရေးအသား
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအင်္ဂလိပ်စာအရေးအသား ဆိုသည်မှာ jargon ဟုခေါ်သည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခု၊ ပညာရှင်တစ်စုအချင်းချင်းသာ နားလည်နိုင်သည့်စကားများကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဘန်းစကားနှင့် လူထုယဉ်ပါးမှုမရှိသည့်စကားလုံးများရှောင်ရှားခြင်းတို့လည်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စကားကို မိခင်ဘာသာ စကားအဖြစ်အသုံးပြုသည့်နိုင်ငံအချင်းချင်းပင် တစ်ချို့စကားလုံးများကိုနားလည်ပုံ မတူညီနိုင်ပေ။ ဥပမာ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်သုံးသည့် fortnight နှစ်ပတ်တစ်ခါ ဆိုသည့်စကားလုံးမှာ အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါတွင် လူသုံးနည်းသည့်စကားလုံးဖြစ်နေသည်။
Amy Stephens ကသူမ၏ blog တွင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအင်္ဂလိပ်အရေးအသား မူရှစ်မျိုးကိုအောက်ပါ အတိုင်းဖော်ပြထားသည်။
1. Write for the reader, not the writer. စာဖတ်ပရိတ်သတ်(နားလည်ဖို့)အတွက်ရေးပါ။ စာရေးသူအတွက်မရေးပါနှင့်
2. Use simple, familiar vocabulary and plain English. ရိုးရှင်းသော၊ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ရင်းနှီးပြီးသားစကားလုံးများသုံးပါ။
3. Use correct grammar, spelling and punctuation. သဒ္ဒါ၊ စာလုံးပေါင်းနှင့် အဖြတ်အတောက် မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးပါ။
4. Structure content inalogical way. The top of the page is the most important. အကြောင်းအရာကို သဘာဝကျသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းပါ။ စာမျက်နှာပေါ်ဆုံးပိုင်းသည်အရေးအကြီးဆုံး။
5. Be concise. Studies show less is more when it comes to words onawebsite. လိုတိုရှင်းရေးပါ။ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် စကားလုံးများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် နည်းသည် ကပိုအလုပ်ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာမှုများကဖော်ပြနေသည်။
6. Use positive language – it’s shorter and clearer. အပြုသဘောဆောင်သည့်စကားရပ် ကိုသုံးပါ။ ပို၍တို၊ ရှင်းသည်။
7. Get personal. Useaconversational tone and the word ‘you’. အများကိုရည်ညွှန်းပါ။ စကားပြောလေသံဖြင့် “youသင်” ဆိုသည့်စကားလုံးသုံးပါ။
8. Use easy-to-read design. If it looks good, people are more likely to read it. ဖတ်ရလွယ်သော သွင်ပြင်ပုံစံကိုသုံးပါ။ ကြည့်ရရှင်းလျှင် လူတို့ပိုဖတ်ဖြစ်မည်။
အောက်တွင် နားလည်ရခက်သည့်စကားအား ရိုးရှင်းသည့်စကားလုံးဖြင့်အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်ရန် စကားလုံးတစ်ချို့ပေးထားပါသည်။ ၄င်းတို့သည် မူရင်းစကားအား ထပ်တူအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပေးနိုင်သည် ဟုမယူဆနိုင်သော်လည်း ၄င်းတို့ဆိုလိုရင်းကိုရောက်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ နမူနာ စာရင်းသာဖြစ်သည်။
32. is in consonance with: agrees with follows
38. provide(s) guidance for/to: guides
42. successfully accomplish/complete: accomplish/complete
Permalink Reply by Aye Hnin Moe on September 6, 2013 at 6:56
Permalink Reply by Thet Swe Swe on September 9, 2013 at 12:30
ohh !! good words...
Permalink Reply by venus on September 10, 2013 at 13:40
Permalink Reply by dantewade on September 11, 2013 at 9:05
Permalink Reply by hninhninaye on September 11, 2013 at 9:35
Permalink Reply by tin nilar win on September 11, 2013 at 9:58
Thank u! I will note it.
Permalink Reply by Htoo Rein Lwin on September 12, 2013 at 4:41
Thank you,Sir.That is true that write for the reader, not for the writer.
Permalink Reply by Haymahn on September 26, 2013 at 9:16
Permalink Reply by kee maang hning pai on November 9, 2013 at 15:22
Permalink Reply by aungnaingthu on October 31, 2014 at 18:43
Permalink Reply by David, aka 'Thian Khan Thang' on November 4, 2014 at 23:24